Kenya: 'Tallaabo' ayaan ka qaadaysa Maamulka Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya: ‘Tallaabo’ ayaan ka qaadaysa Maamulka Farmaajo
"Dhaqankan lama filaanka ah ee aan loo baahnayn ee hoggaanka Soomaaliya waa wax u baahan in aan ka fekerno inta aanan ka hadlin. Waxaan si rasmi ah uga jawaabi doonnaa dariiqyada ku habboon dhawaan," ayuu yiri Macharia.
NAIROBI, Kenya - Xoghayaha guud ee arrimaha dibedda Kenya Kamau Macharia ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go’aanka ay Soomaaliya ku ceyrisay danjiraheeda u fadhiyay Muqdisho Lucas Tumbo.
Macharia wuxuu sheegay in Nairobi ay qiimeyneyso go'aankii Muqdisho ayna kaga jawaabi doonto dariiqyada ku haboon iyo waqtiga wanaagsan.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay dalkeeda ka ceyrisay Safiirka Kenya Lucas Tumbo, islamarkaana wadatashi ugu yeertay Safiirkeeda Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Maamulka Farmaajo oo siyaasadda dibadda iyo gudaha ku fashilantay, ayaa ku eedeeyay dowlada Kenya inay faragelin ku hayso Jubbaland, islamarkaanka ay Axmed Madoobe ku cadaadisay inuu ka baxo heshiiskii doorashadda.
"Dowladda Soomaaliya waxay muujineysaa inay ka xun tahay faragalinta qaawan ee Kenya ay ku hayso arrimaha gudaha iyo siyaasada, taasoo keeni karta inay caqabad ku noqoto xasiloonida," ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaarada arimaha dibada Soomaaliya.
Muranka Axmed Madoobe & Jubbaland
Kenya ayaa Ciidamo waxay ka joogaan Gedo iyo qeybo kamid ah Jubbada Hoose, waxayna hogaamiye Axmed Madoobe ku ilaalisaa Kismaayo, iyadoo danaheeda gaar ah ku fulisato.
Kenya ayaa cadaadis ku haysa Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe, si uu u fuliyo qorshaheeda ku aaddan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee Doorashooyinka ee Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ay ku gaareen Muqdisho 17kii Sebteembar 2020.
Go'aankan ayaa yimid kadib markii shalay Axmed Madoobe uu sheegay in Farmaajo uu jebiyay qodobada heshiiskii doorashadda, isagoo sidoo kale iclaamiyay in aan Jubbaland doorashada ka qeybgalaynin.
Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka dhaxeeya muran ku saabsan xuduuda badda, iyadoo kiiskan uu horyaallo Maxkamadda ICJ, oo fadhigeedu yahay dalka Holland taasoo lagu sugayo inay go'aan ka soo saarto.
0 Comments Topics: jubbaland kenya kismaayo
Oktoobar 16, 2011, Kenya ayaa kusoo duushay Soomaaliya, iyadoo mar-marsiiyo ka dhigatay inay baacsanayso Al-Shabaab, sidaasna ugu xad-gudubtay madaxbanaanida dalka iyo qaranimada.
Al-Shabaab iyo Ciidanka Kenya ku dagaalamay Mandheera
Warar 17 January 2021 9:04
Wafdi ka socda IGAD oo Muqdisho lagula shiray
Warar 10 January 2021 18:55